KULMIYAHA UK HA SUGU INTA ISBAHAYSIGA SHARKU DHAN U DHACAAYO | Maalmahanews
KULMIYAHA UK HA SUGU INTA ISBAHAYSIGA SHARKU DHAN U DHACAAYO
Waxaa baryahan isa soo taraaya raga dabada ka riixaaya oo abuuraaya khilafka ka muuqda Kulmiye U.K. Waxa ilaa shalay ley sheegay in la dareemaaayey dhaqdhaqaaq daba socda hadalkii Faysal ee xidhiidhka UCID la sameysay Isbahaysiga sharka. Waxa isla shalayba ka bilaabmay xidhiidh kooxo Kulmiye qasaayey ee Cardiff, Bristol iyo London oo bilaabay inay la shawraan UCID si qarsoodi ah.
Kooxahanai waxay rabaan inay ka dhex toosaan guddiyada Kulmiye oo iyaga oo Guddiyada ka mid ah oo magaca guddiyada wata ay is casilaan kuna biiraan UCID iyo kolba halka aabayaashood u kaxeeyaan. Ma aha dar madax banana bal se waxa ay ku shaqaynayaan caqli iyo cudud kale oo rabta inay burburka uGu weyn ku sameeyaan xisbiga iyo magaciisaa.
Haddaba waxaan leeyahay dib u dhiga dhismaya guddiyada si gaar ah Fulinta U.K. Sharka idinku dhex jiraan yaanu idinka xeelad badin ee suga inta colka caqliga u sidaa ay meel u dhaqaaqiyaan ma fago oo waqtiba riixaaya..
Taas ayaa daawo u ah soo afjaridda khilaafka meereysiga ah ee waqtiga lagu dilayo, laguna rabao in guddiyada la dhex galo deedna laga yaaco. Waa xeelad lacag iyo fikirba laga maal galinaayo xisaabta Xirsi oo ku dhaartay inuu dhulka dhigo KUlmiye waa caqligiisa. OO horeba waxuu aaminsaan in is casilaadiisu dhulka dhigayso xukuumadda Siilaanyo. NIn is cajabiyey oo adduun haysta ma ark runta ee waxuu maqlaa inta beenta uGu sacbisa. Haddaba reer Kulmiye U.K anagaa ayaa gudaha joogna oo la socona xidhiidhka joogtada ah ee ragga qaska wada dabada ka riixaaya. Kolka aad qabatan intii cadaysatay diidmada murashaxiinta waxay odhan waanu soo noqonay, meel ay qoraal iyo hadal ka yidhaahdeen ma jirto. Raguu waa inuu is caddeeya sida Wasir Cukuse iyo Agaasime Xinif, raganimadu waa taas. Laakiin colkan labada af leh waxy yihiin qaar sidaa lagu amray oo la yidhi ha ka bixina idinkoon guddiyada gelin, si ay khasaaraha uGu weyn u yeelaan xisbiga.
Warkani iska qor ma aha waa xog run ah ee reer KUlmiye U,K Alle ha ku anfaco.
A Jama (Burcaatidhi)